တရုတ်နိုင်ငံက အေဒင်ပင်လယ်ကွေ့ တွင် အစောင့်အရှောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ရေတပ်သင်္ဘောအုပ်စုသစ် စေလွှတ် - Xinhua News Agency
အေဒင်ပင်လယ်ကွေ့ နှင့် ဆိုမာလီ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့၌ အစောင့်အရှောက်တာဝန် သွားရောက်ထမ်းဆောင်မည့် တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်(PLA)၏ ၃၉ ကြိမ်မြောက် ရေတပ်သင်္ဘောအုပ်စုအား တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ဆန်းတုန်းပြည်နယ် Qingdao မြို့ရှိ ဆိပ်ကမ်း၌ စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကျိနန် ၊ စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အေဒင်ပင်လယ်ကွေ့ နှင့် ဆိုမာလီ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့၌ အစောင့်အရှောက်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန်အတွက် စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ဆန်းတုန်းပြည်နယ် Qingdao မြို့မှ တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်(PLA)၏ ၃၉ ကြိမ်မြောက် ရေယာဉ်အုပ်စု ထွက်ခွာသွားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ရေယာဉ်အုပ်စုတွင် ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်ဖျက်သင်္ဘော Urumqi ၊ ဒုံးကျည်ဖရီးဂိတ်စစ်သင်္ဘော Yantai နှင့် ထောက်ပံ့ရေးသင်္ဘော Taihu တို့နှင့်အတူ သင်္ဘောပေါ်တွင် အထူးစစ်သည်များ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ နှင့် ရဟတ်ယာဉ်နှစ်စင်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းတာဝန်အတွက် ပြင်ဆင်သည့်အနေဖြင့် ရေတပ်သင်္ဘောအုပ်စုသည် လက်နက်များ အသုံးပြုခြင်း ၊ အကြမ်းဖက်မှုတန်ပြန် တိုက်ခိုက်ရေး နှင့် ပင်လယ်ဓားပြမှုနိမ်နင်းရေး တို့အပြင် ပင်လယ်ပြင်၌ အားဖြည့်ခြင်းတို့အား လေ့ကျင့်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
JINAN, Sept. 26 (Xinhua) — The 39th fleet of the Chinese People’s Liberation Army (PLA) Navy set out from the city of Qingdao, in east China’s Shandong Province, on Sunday to conduct an escort mission in the Gulf of Aden and the waters off Somalia.
The PLA Navy began conducting escort missions in the Gulf of Aden and the waters off Somalia in December 2008. Enditem
Photo 1 – The 39th fleet of the Chinese People’s Liberation Army (PLA) Navy sets out to conduct an escort mission in the Gulf of Aden and the waters off Somalia, ataport in Qingdao, east China’s Shandong Province, Sept. 26, 2021. The fleet is composed of the guided-missile destroyer Urumqi, the missile frigate Yantai, and the supply ship Taihu, with dozens of special-operations soldiers and two helicopters on board. The PLA Navy began conducting escort missions in the Gulf of Aden and the waters off Somalia in December 2008. (Photo by Liu Zaiyao/Xinhua)
Photo2– The 39th fleet of the Chinese People’s Liberation Army (PLA) Navy sets out to conduct an escort mission in the Gulf of Aden and the waters off Somalia, ataport in Qingdao, east China’s Shandong Province, Sept. 26, 2021. The fleet is composed of the guided-missile destroyer Urumqi, the missile frigate Yantai, and the supply ship Taihu, with dozens of special-operations soldiers and two helicopters on board. The PLA Navy began conducting escort missions in the Gulf of Aden and the waters off Somalia in December 2008. (Photo by Liu Zaiyao/Xinhua)